What’s Lost When We Rush Kids Through Childhood – Mandalay International Science Academy
October 24, 2020 Wai Yan
Emily Christakis ဟာ ယေးလျ-ကလေးသုတသေနစငျတာရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈသလို ကလေးငယျဖွဈခွငျးရဲ့ အရေးပါမှု (The impotence of Being Little ) ‘လူကွီးတို့ထံက ကလေးငယျတှေ အမှနျတကယျ လိုအပျနတေဲ့အရာ‘ ဆိုတဲ့ အရောငျးရဆုံးစာရငျးဝငျစာအုပျကို ရေးသားခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကလေးတှနေဲ့ပတျသကျရငျခြောကျကမျးပါးစှနျး နငျးမိနတေဲ့အန်တရာယျမြိုးနဲ့ကွုံနရေတဲ့ကာလပဲလို့ Christakas ကဆိုပါတယျ။သူတို့ကိုရောငျးကုနျပစ်စညျးတှလေို သဘောထားလုပျဆောငျတာတှေ တိုးလာလလေေ ကလေးတှရေဲ့ကလေးတို့ရဲ့ ငယျဘဝပြောကျဆုံးမှုအန်တရာယျနဲ့ ကွုံလာရလလေပေဲလို့ သူမက ဆိုတယျ။ သူတို့အပျေါ မြှျောလငျ့ခကျြတှပေုံထားမဲ့အစား၊ မိဘတှနေဲ့ဆရာဆရာမတှကေ သူတို့ရဲ့မကျြလုံးတှပေျေါကာရံထားတဲ့အကာတှဖေယျရှားပေးဖို့လုပျဆောငျသငျ့ကွတယျလို့ သူမက ဆိုတယျ။
ကလေးတှရေဲ့မကျြဝနျးထဲကနမွေငျရမဲ့လောကကွီးကိုကလေးတှကွေညျ့သလိုမွငျအောငျကွညျ့ပါ။ ဒီလို အမွငျပွောငျးလဲမှုကကလေးတှကေိုပိုပွီးနားလညျလာစမေယျ။ ကလေးတို့ရဲ့ သူမတူတဲ့ စှမျးရညျတှကေို ဖှံ့ဖွိုးလာအောငျပြိုးထောငျပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့သူမကဆိုပါတယျ။ ကလေးရဲ့ဝနျးကငျြမှာ ဖွဈပျေါပွောငျးလဲနတေဲ့ ယဉျကြေးမှုတနျဖိုးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မကွာသေးခငျကပဲ သူမနဲ့မေးမွနျူခှငျ့ကွုံခဲ့ပါတယျ။
ငယျစဉျကလေးဘဝအတှကျကောငျးမှနျတဲ့ပညာရေးပတျဝနျးကငျြတဈခု ဆိုတာက ဘယျလိုဝနျးကငျြမြိုးလဲ … ကလေးအရှယျရောကျပွီလို့ဆိုနိုငျတဲ့အထိ ကမြတို့တှကေ ဘာတှကေို
ကွံ့ကွံ့ခံ ဆနျ့ကငျြရငျဆိုငျသှားရမလဲ … ဆိုတာကို သူမနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။
အငျတာဗြူးကိုရှညျလှနျးမနအေောငျနဲ့ ပိုပွီးရှငျးလငျးလှယျကူအောငျ တညျးဖွတျထားပါတယျ။
ကလေးသူငယျပညာရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ရှငျရေးခဲ့တဲ့စာအုပျကို The Importance of Being Little ငယျရှယျမှု၏ အရေးပါမှု ဆိုပွီးအမညျးပေးခဲ့တယျနျော ။ဘာ့ကွောငျ့ငယျရှယျခွငျးက အရေးကွီးရတာပါလဲ? ငယျရှယျသူတို့ရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုအဆငျ့နဲ့ပတျသကျလို့ မူဝါဒရေးဆှဲသူတှေ၊ ပညာရေးသမားတှနေဲ့ မိဘတှကေို ဘာတှမြေားသိစခေငျြလို့ပါလဲ?
နိုငျငံအနှံ့ခရီးထှကျတာတှေ၊ စာသငျကွားခွငျး နဲ့ နောကျခံအမြိုးမြိုး ပတျဝနျးကငျြအသီးသီးက ပညာရေး သမားတှေ မိဘတှနေဲ့ စကားပွောဆိုရာကနကေမြ သိလာရတာကတော့ကလေးတှကေို ငယျစဥျ ကလေးဘဝကတညျးက ဆုံးရှုံးရတဲ့အန်တရာယျနဲ့ ကမြတို့ကွုံနရေ ပွီဆိုတာပါပဲ။ ငယျစဉျဘဝဆိုတဲ့ကလေးဘဝတနျဖိုး၊ ကလေးတှဖွေဈခငျြတဲ့ဆန်ဒ၊ လိုခငျြတဲ့လိုအငျ စတာတှကေို အလေးပေးမှု မရှိကွတော့ဘူး။
နောငျအနာဂတျမှာ အမွတျရဖို့ ကုနျလှောငျရငျးနှီးသလိုမြိုး ကလေးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွောဆိုလာတာတှေ ပိုပွီးမြားလာနတေယျ။ ကလေးတှအေနာဂတျအတှကျ အလှနျအမငျးစိုးရိမျတယျလို့ မိဘတှကေ ပွောကွတယျ။ ကလေးတှရေဲ့ငယျဘဝအတှကွေုံ့ကို သဘာဝမကတြဲ့နညျးမြိုးတှနေဲ့ ပါဝငျစီမံလာကွတယျ။ ဟိုးအရငျတုနျးက ကလေးတှကွေုံရတဲ့ပြ ပြျောရှငျမှုမြိုးတောငျ ပြျောရှငျခှငျ့မရတော့သလိုပါပဲ။ ကလေးတှကေိုဘေးလညျးကငျးစေ၊ စိတျလညျးဖိစီးစဆေိုတာလိုမြိုး ရှနေ့ောကျမညီတဲ့ အတှေးချေါမြိုးရှိ နကွေတယျ။ ကလေးအမြားစု၊ အထူးသဖွငျ့ စကျမှုဖှံ့ဖွိုးတဲ့နိုငျငံတှကေ ကလေးငယျတှဟော ဘယျတုနျး ကမှမတူတဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုမြိုး ရကွတယျ။ ကလသေနေူနျး နညျးလာတယျ။ အဟာရခြို့တဲ့လို့ဖွဈရတဲ့ ရောဂါမြိုးတှနေညျးလာတယျ။ အလုပျခိုငျးဖို့ ကြောကျမီးသှေးတှငျးနကျတှထေဲ ဆငျးခိုငျးစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကလေးတျောတျောမြားမြားမှာ စိတျဒဏျရာတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ ဆငျးရဲမှဲတမှေုတှေ ရှိနပေါတယျ။
ယဘေုယြ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ကလေးတှကေိုအသကျဆုံးစနေိုငျလောကျတဲ့ထိဖွဈစတေဲ့ အရာမြိုးတှကေို ကမြတို့ကြျောလှားနိုငျခဲ့ကွပွီးပါပွီ။
ဒါပမေဲ့အခွားတဖကျမှာတော့ ၂၁-ရာစု အမရေိကနျ လူ့အဖှဲ့အစညျးက ကလေးငယျတှအေတှကျ စိနျချေါမှု အမွောကျအမြားကိုလညျး ဖနျတီးနပွေနျပါတယျ။နညျးပညာက လူငယျတှအေတှကျ မိတျဆှဆေိုတာမြိုး အမွဲတစေ ဖွဈမနနေိုငျပါဘူး။ သဈအသဈသော စိတျဖိစီးရမှုတှကေိုလညျး ဖွဈစပေါတယျ။ မူကွိုကြောငျးတှမှော အမှနျတကယျပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ဖယျကဉျြခံရမှုတှရှေိနတေယျ။ဥပမာ – (ဒါက အသားရောငျရှိကလေးတှေ နဲ့ ယောကျကြားလေးငယျတှကွေားပိုပွီးသိသာတယျ) စိတျကနျြးမာရေးပွသနားရှိတဲ့ကလေးတှေ၊ အမူအကငျြ့ပိုငျးဆိုငျရာ ပွသနာရှိတဲ့ ကလေးတှတေိုးလာနတောပါ။
“ကလေးဖွဈခွငျး” ဆိုတဲ့အခကျြက တကယျ့ကို အရေးပါတာပါ။လူတှရေဲ့ရုပျခန်ဓာမှာ ငယျဘဝ အမှတျလက်ခဏာတှကေို တှမွေ့ငျကွရတာကွောငျ့ပါ။ ကစားရငျး သငျယူခှငျ့ရခဲ့ရငျ ၊ တဈဦးနဲ့တဈဦး
နှဈနှဈကာကာ ဆကျဆံခှငျ့တှေ ရခဲ့ကွရငျ သူတို့ရဲ့ဘဝသကျတမျးတှကေ ပိုရှညျကွာသလို၊ လူမှုစီးပှါးစှမျးဆောငျရညျတှလေညျး ပိုကောငျးလာကွလိမျ့မယျ။ သူတို့ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးနဆေဲဦးနှောကျတှကေ သဘာဝကကြ ဖှံ့ဖွိုးခှငျ့ရ၊ ဘာသာစကားတှကွှေယျဝစှာနဲ့ အလငျြလိုမနတေဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွီးပွငျးခှငျ့ရမယျ ဆိုရငျပေါ့လေ။ ဟိုအရငျတုံးကထကျပိုရှငျး လာတဲ့အခကျြကတော့ ကလေးဆိုတာ
မှနျပါတယျရှငျ့။ဒါနဲ့ ရှငျ့ရဲ့စာအုပျမှာ Adultification လူကွီးသတျမှတျခွငျးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးခဲ့တယျနျော။ ဒါကိုဘယျလိုအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုမလဲရှငျ့။ ပွီးတော့ ကလေးဘဝနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကမြတို့ရဲ့အမွငျအပျေါ ဒါက ဘယျလို သကျရောကျမှုမြိုးရှိစမေလဲ?
Adultification ဆိုတာက ကလေးတဈယောကျအမွငျမြိုးနဲ့လောကကိုမကွညျ့မွငျနိုငျတော့ကိုဆိုလို တာပါ။ တခါတရံ ဆရာဆရာမတှကေို ကမြပွောတယျ။ ကွမျးပွငျပျေါထိုငျခပြွီး ၄-နှဈသားကလေး မွငျရတဲ့ အမွငျ့ကနေ ပါတျဝနျးကငျြကို ကွညျ့ကွညျ့စမျးပါလို့။ ဒါမှမဟုတျလညျး ကလေးတှဝေတျတဲ့ နှငျးကာဝတျပွီး၊ ကလေးတဈယောကျရဲ့ ခွလေကျလှုပျရှားနိုငျစှမျးကို စမျးကွညျ့ကွစမျးပါလို့။ ဒါက လူကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ ကလေးတှရေဲ့ အခြိနျဇယားတှစေီမံမှု၊ ကလေးတှအေပျေါထားတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ၊ လူကွီးနူနျးနဲ့ ကလေးတှပေျေါ စဉျးစားမှုတှကေို အမွငျပှငျ့စမေယျ့ နညျးမြားစှာထဲက တဈနညျးပါပဲ။ အရငျခတျေကလေးတှထေကျ အတနျးထဲမှာ အခြိနျအကွာကွီးပိုနရေ အိပျစကျခြိနျတှပေို နညျးကုနျရတာ ဘာအတှကျလဲ? ကလေးတှရေဲ့ဖှံ့ဖွိုးဆဲ ဦးနှောကျတှေ က လူကွီးတှရေဲ့ အစီစဉျ ဇယားတှေ၊ လူကွီးစံနူနျးတှအေတိုငျး လိုကျနိုငျဖို့ ပုံစံထုတျထားတာ မဟုတျဘူးဆိုတာကိုတော့ မိဘတှရေော၊ ပညာရေးသမားတှပေါ လကျခံသဘောတူနိုငျကွလိမျ့မယျလို့ ကမြထငျပါတယျ။
ဒါကပွသနာတဈရပျပဲလို့တော့ အခွခေံအားဖွငျ့သိကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုသံသရာလညျနတောကိုတော့
ရပျတနျ့ပဈဖို့ခကျနကွေတယျ။ နောကျကိုခွတေဈလှမျးပွနျဆုတျပွီး ကလေးတှရေဲ့အမွငျနဲ့ လောကကွီးကို ကမြတို့ကွညျ့ဖို့လိုပွီ။လူကွီးတဈယောကျရဲ့မကျြလုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ကမြတို့ကွညျ့တယျ။ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ရှံ့ပုံးထဲကို တဈနာရီလောကျထိုငျ တူးနတေဲ့အပျေါ ဘယျလိုသငျယူမှုမြိုးကိုမှ ကမြတို့အနနေဲ့မွငျနိုငျစရာမရှိဘူး။ ဒီတော့ သင်ျခြာ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရမယျ့အခြိနျရောကျပွီ ဆိုပွီးကွိမျတို့နှငျလှတျတယျ။
အပွငျထှကျကစားရတဲ့ ကစားခြိနျက နညျးလိုကျတာဆိုပွီး စိတျပကျြ စိတျကုနျစတေယျ။ ကလေးအမြားစု သူတို့ငယျဘဝမှာရခဲ့ကွတဲ့ ကွှကျသားတှေ သနျစှမျးစတေဲ့ကစားနညျးတှလေေ။ ဒီလိုမြိုး လူကွီးလိုသဘောထားသတျမှတျတာတှေ က ကလေးတှကေို ပိုဖွဈထှနျးစလေိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြက လာတာ။ ကလေးတှေ လုပျနိုငျတယျဆိုတာကို လေးလေးနကျနကျ မယုံကွညျရာကနဖွေဈလာတာပါ။
အရညျသှေးမွငျ့ ကလေးသူငယျပညာရေး ဆိုတာဘယျလိုမြိုးပါလဲ? အကောငျးဆုံး သငျခနျးစာတှကေို
လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးနတေဲ့ မူကွိုကြောငျးတဈခုထဲကို လမျးလြှောကျဝငျသှားခဲ့ရငျ ဘာတှမွေငျလို့
ဘာတှကွေားရမယျလို့ ထငျပါသလဲ? အရညျသှေးရှိ ပညာရေး ဆိုတာက ဆကျဆံရေးတှပေါပဲ။ ကလေးဖှံဖွိုးရေးနဲ့ပတျသကျလို့ နားလညျတဲ့ ၊သိတဲ့၊ ကလေးတှကေို စောငျ့ရှောကျတဲ့၊ မိမိတို့ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျမှုနဲ့ ကလေးတှကေို တဈသားတညျးဖွဈလာစတေဲ့ ဆရာဆရာမတှဟော ကမြတို့ ဒီနခေ့တျေရဲ့ပညာရေး အရညျ အသှေးကို တိုငျးတာနတေဲ့ အတိုငျးအတာ မြားစှာထကျကို ပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ။ အတနျးအရှယျအစားတို့၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပတျဝနျးကငျြတို့၊ အထူးရေးဆှဲ
ထားတဲ့ သငျရိုးတို့ ဆိုတာတှထေကျကို အမြားကွီးပိုပွီးအရေးပါ ပါတယျ။
လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ စကားတှအေမြားကွီးအပွနျအလှနျပွောဆိုတာမြိုးက အလှနျအရေးကွီးတယျ။
တဈနတေ့ာမှာ နှေးထှေး ခံစားပေးတတျတဲ့ စကားပွောတာမြိုးကို ကလေးတှေ တှကွေုံ့ရဖို့လိုတယျ။
အခငျြးခငျြးလညျး စနောကျ ကွညျဆယျရငျး စကားပွောခြိနျရှိဖို့လိုတယျ။ လူကွီးတှနေဲ့ တောငျစဉျရမေရစကားတှေ ပွောကွဖို့အခြိနျလညျးရှိဖို့လိုတယျ။စာကောငျးပမှေနျတှကေို နားထောငျစရေငျး အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ မေးခှနျးတှလေညျးမေးတတျကွရမယျ။
သုတသေနအရတော့ အရညျခငျြးရှိတဲ့ ကလေးစောငျ့ရှောကျသူဆိုတာ ကလေးဖှံ့ဖွိုးမှု (၃-နှဈအရှယျကလေးက ဘယျလို) အပွငျ နှီးနှယျနတေဲ့ အခွားဖှံ့ဖွိုးမှု အတိုငျးအတာတှကေိုလညျး သိရလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျ ကလေး တဈဦးခငျြး (ကိုယျ့ကလေးကဘယျလိုဆိုတာ) ကိုလညျးသိကွရမယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသအေခြာမှတျထားရမှာ ကတော့ စနဈတကြ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ သငျပေးတဲ့သငျကွားရေးဆိုတာ ပှဲခငျးထဲမှာ ကလေးတိုငျး ပွေးခငျြသလို ပွေးလို့ရတာမြိုးနဲ့တော့ ဆနျ့ကငျြဘကျဆိုတာကိုပါပဲ။
အရညျအသှေးရှိတဲ့ မူကွိုဆရာ ဆိုတာ သူလုပျသမြှတိုငျးမှာ ရညျရှယျခကျြရှိရတယျ။ အတနျးအစီအစဉျဇယား၊ နစေ့ဉျလုပျငနျး၊ အတနျးတှငျးမှာရှိတဲ့ပစ်စညျးတှေ၊ ကလေးတှေ စူးစမျးရှာဖှဖေို့ ၊ ကြှမျးကငျြအောငျကိုငျတှယျဖို့ထားတဲ့ ပစ်စညျးပစ်စယအဆုံး အားလုံးသူ့ရညျရှယျခကျြနဲ့သူရှိရမယျ။
ဒီလိုဆရာဆရာမမြိုးတှကေ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့တာ၊ ပွနျလှနျသုံးသပျတာ စတာတှေ အတှကျအခြိနျကို သူမတူအောငျ အသုံးပွုကွသူတှဖွေဈတယျ။ ဘာမှမရှိပဲနဲ့တော့ ဘာကိုသှားစောငျ့ကွညျ့မလဲ။ အကောငျးဆုံး မူကွိုကြောငျးဆိုတာ တာဝနျသိမှု၊ စူးစမျးလလေ့ာမှု တှကေို အခွခေံတဲ့ ပြိုးထောငျမှုမြိုးရှိတဲ့ကြောငျးပါပဲ။ ဒီလိုသဘာဝရှိမှလညျး အတူတူ စူးစမျးလလေ့ာ နိုငျမယျ၊ ကလေးတှရေဲ့စူးစမျးစပျစုလိုတဲ့ စိတျနသေဘာဝ အသုံးခပြွီး မိမိတို့ရဲ့သငျယူမှု ပါတျဝနျးကငျြကို ပိုပွီး ကောငျးအောငျ ပွုပွငျသှားနိုငျမှာပေါ့။
ဒါကစိတျဒါဏျရာရှိတဲ့ကလေးတှေ၊ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ ငယျဘဝ ခါးသီးအတှကွေုံ့ရှိတဲ့ ကလေး အမြားစုအတှကျ လုံးဝအမှနျတရားပါပဲ။ညကဘာမှ မစားခဲ့ရဘဲ အိပျယာဝငျခဲ့ရပွီး အိပျယာနိုး တံခါးဝဆီ ထသှားတဲ့ကလေး၊ ဒါမှမဟုတျ- ကောငျးကောငျးမှနျမှနျစောငျ့ရှောကျခံရ၊ ကိုယျ့ကို လကျခံတဲ့ညီအဈကိုမောငျနှမ၊ အဖိုး၊ အဖှားစသညျရှိတဲ့ ကလေးဆိုပါစို့ … အရညျသှေးရှိ မူကွိုကြောငျး စာသငျခနျးမှာ အတှကွေုံ့တှအေခွခေံတဲ့ဆောငျရှကျမှုမြိုးတှရှေိမယျ။ အသိဉာဏျနဲ့ စိတျလှုပျရှား ခံစားမှုတှဖှေံ့ဖွိုးစမေဲ့နညျး လမျးရှိမယျ။ ဒီလို ပါတျဝနျးကငျြမြိုးမှာ ပညာပေးသူတှကေ ကလေးအားလုံး အပွညျ့အဝ သငျယူနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတဲ့စမှတျကနေ စကွရလိမျ့မယျ။ ပွီးရငျ ကြောငျး ၊ဒါမှမဟုတျ ပွညျနယျအာဏာပိုငျတှေ ပွောကွတဲ့ သငျယူမှုဆိုတာတှမြေိုးတှကေိုလညျး ငွငျးပယျရလိမျ့မယျ။
ကစားခွငျးရဲ့ အရေးပါပုံ အကွောငျး ရှငျကတျောတျောမြားမြားရေးထားတယျ။ ဒီတော့ ကစားခွငျးဆိုတာကို ရှငျကဘယျလိုမြားအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ပါသလဲ။ပွီးတော့ ကစားခွငျးက ဘာ့ကွောငျ့ဒီလောကျအရေးကွီးရပါသလဲ?
ကစားတာက နို့တိုကျသတ်တဝါတှမှော ဖှံဖွိုးမှု အတှကျလိုအပျတဲ့အလုပျပါပဲ။ ဒီလိုကစားလိုစိတျက
ခြိုးနှိမျလို့မရအောငျကို အရိုးအသားထဲစှဲနတေဲ့ လှုံ့ဆျောခကျြပဲ။ အရေးကွီးတာက ကစားခငျြတဲ့ စိတျကတဈခု၊ ကစားနညျးသိတာက တခွားဖွဈတယျ။၊ အမွဲသဘာဝကနြဖေို့ လိုတာမြိုး မဟုတျဘူး။ သသေခြောခြာစနဈတကပြိုးထောငျပေးဖို့လိုတယျ။ ခတျေမီဖှံ့ဖွိုးတဲ့နိုငျငံတှကေ လူ့အဖှဲ့အစညျးတှမှော ပိုပွီး တလှဲကတြဲ့ ကစားနညျးတှေ မြားနတော တှရေ့တယျ။ ကလေးတှကေ သကျရှယျမြိုးစုံအုပျစုတှနေဲ့ မကစားကွဘူး။ အသကျရှယျစုံအုပျစုမှာဆိုရငျ အငယျတှကေ အကွီးတှထေံနေ သငျယူလို့ရတယျ။ အကွီးတှကေလညျး ငယျသူအပျေါ သနားတာ၊ညှာတာ တာတှကေို သငျယူခှငျ့ရမယျ။ ကလေးတှေ ဆူညံပတျ ပွေးနတေဲ့ အခြိနျမြိုးနဲသှားပွီး ကိုယျ့ကစားပှဲစညျးကမျး ကိုယျခတြတျလာမယျ။ ထိထိရောကျရောကျ ကစားနိုငျဖို့ရာအတှကျ နရောနဲ့ အခြိနျလိုတယျ။
ပွီးတော့ ကစားတာကို တနျဖိုးထားတဲ့ယဉျကြေးမှုမြိုးလညျးရှိဖို့လိုတယျ။
ဒီလို ကလေးသဘာဝ ယဉျကြေးမှုတှေ သိပျမတှရေ့တော့ဘူး။ “ကဲဟေ့။ကတျထူပွားတှနေဲ့ ခံတပျတဈခုသှားလုပျကွ” လို့ ကလေးတှကေို ခကျြခွငျး ခိုငျးလိုကျတယျ ဆိုပါစို့။ စနဈတကြ စီမံထားတဲ့အခြိနျမရှိ၊ လိုခငျြတဲ့ပစ်စညျး ရှာလို့ရနိုငျမယျ့ နရောမရှိ၊ စားခြိနျလှတျစီမံတာမရှိဆိုရငျ စိတျတိုနမေယျ့ စိတျပါလကျပါမရှိတဲ့ကလေးပဲ တှရေ့ဖို့ပိုဖွဈနိုငျလိမျ့မယျ။
ကမြတို့က မူကွိုလို့သုံးနူနျးချေါဝျေါနတေဲ့စကားလုံးမှာ ကလေးသူငယျသငျရိုးဆိုတာမြိုး အစဈအမှနျပါဝငျနစေရာမလိုဘူးလို့ ရှငျကပွောခဲ့တယျ။ကြောငျးမှာလညျး ဒီလိုမြိုးရှိနဖေို့မလိုဘူးလို့ပွောတယျ။
ပနျးပှငျ့ပျေါ လိပျပွာနားတာကို ကွညျ့ပွီး အံ့ဩနတေဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့မကျြနှာပျေါက အံ့အားသငျ့မှုကိုတှမွေ့ငျတဲ့ဘယျသူမဆိုဟာ သငျယူမှုဆိုတာ စာသငျခနျးထဲမှာပဲ ရှိတာ မဟုတျဘူး ဆိုတာကို နားလညျ သဘောပေါကျလိမျ့မယျ။ ကလေးတဈယောကျက ဘယျလိုနရော အနအေထားမှာ မဆို သငျယူနိုငျစှမျးက ရိုးတှငျးခဉျြဆီထဲကကို ရှိနတေယျ၊ ပါလာတယျ ဆိုတာကတော့ သတငျးကောငျးပဲ။ တာဝနျယူတတျတဲ့ လူကွီးတဈယောကျယောကျရဲ့ ခဈြခငျစိတျနဲ့ အတူ ဖေးမကူညီမှုရှိခဲ့ရငျ မူကွိုကြောငျးကခေါငျးလောငျးသံ၊ ခရာသံတှမေပါလညျး ကလေးတှေ သငျယူနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ။ ဒီတော့ သငျယူမှု အမြားစုက သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ပွောကွသလို လူကွီးနဲ့ ကလေးငယျအကွား အပွနျအလှနျ အပေး အယူ ဆကျဆံရေးကနေ သဘာဝအတိုငျး ရရှိလာကွတာဖွဈတယျ။ တခြို့ကတော့လညျး စကားပွောတဲ့ စုံတှဲ ဆိုပွီးသုံးလရှေိ့တယျ။ ကလေးတှနေဲ့ နစေ့ဉျဆကျဆံရေးမှာ ဒီနညျးလမျးကိုအသုံးခဖြို့ မိဘတှနေဲ့ ပညာရေးသမားတှကေို လမျးညှနျလကေ့ငျြ့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ ဆငျးရဲခမျြးသာကှာဟလို့ ဝငျငှနေညျး မိသားစုက ကလေးတှရေဲ့ ပညာရေး အလှမျးမမီမှု ကှာဟခကျြကို ဖယျရှားပေးနိုငျတဲ့ သကျသအေထောကျအထားအ မြားကွီး ကမြတို့မှာရှိပါတယျ။ ပနျးသီးကဘာရောငျလဲ”။ “ ဘာပုံဆှဲနတောလဲ” စတဲ့ စဈမေးခွငျးဆနျတဲ့ မေးခှနျးမြိုးမဟုတျဘဲ၊ “ဆှဲထားတဲ့ပုံလေးအကွောငျး ဆရာမကို ပွောပွပါလား” ဆိုတဲ့ ပွောလိုရာပွောလို့ရတဲ့မေးခှနျးမြိုးတှမေေးဖို့ ဆရာဆရာမတှကေို ကမြလမျးညှနျပေးလရှေိ့တယျ။ ဒီလို ပွောခငျြရာ တုနျ့ပွနျပွောနိုငျခွငျးက နကျရှိုငျးတဲ့သငျယူမှု နဲ့ ခကျြခွငျး သငျယူမှုအတှကျ ဧရာမ ကှငျးကွီးတဈခုကို အမှနျတကယျ ဖှငျ့ပေးလိုကျတာပါပဲ။
(မူရငျးဆောငျးပါး https://www.edutopia.org/article/whats-lost-when-we-rush-kids-through-childhood အား ဘာသာပွနျပါသညျ။)
Emily Christakis ဟာ ယေးလ်-ကလေးသုတေသနစင်တာရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ကလေးငယ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု (The impotence of Being Little ) ‘လူကြီးတို့ထံက ကလေးငယ်တွေ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့အရာ‘ ဆိုတဲ့ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ချောက်ကမ်းပါးစွန်း နင်းမိနေတဲ့အန္တရာယ်မျိုးနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကာလပဲလို့ Christakas ကဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလို သဘောထားလုပ်ဆောင်တာတွေ တိုးလာလေလေ ကလေးတွေရဲ့ကလေးတို့ရဲ့ ငယ်ဘဝပျောက်ဆုံးမှုအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံလာရလေလေပဲလို့ သူမက ဆိုတယ်။ သူတို့အပေါ် မျှော်လင့်ချက်တွေပုံထားမဲ့အစား၊ မိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေက သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေပေါ်ကာရံထားတဲ့အကာတွေဖယ်ရှားပေးဖို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြတယ်လို့ သူမက ဆိုတယ်။
ကလေးတွေရဲ့မျက်ဝန်းထဲကနေမြင်ရမဲ့လောကကြီးကိုကလေးတွေကြည့်သလိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ ဒီလို အမြင်ပြောင်းလဲမှုကကလေးတွေကိုပိုပြီးနားလည်လာစေမယ်။ ကလေးတို့ရဲ့ သူမတူတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပျိုးထောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ ကလေးရဲ့ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးခင်ကပဲ သူမနဲ့မေးမြန်ူခွင့်ကြုံခဲ့ပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဆိုတာက ဘယ်လိုဝန်းကျင်မျိုးလဲ … ကလေးအရွယ်ရောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အထိ ကျမတို့တွေက ဘာတွေကို
ကြံ့ကြံ့ခံ ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်သွားရမလဲ … ဆိုတာကို သူမနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျူးကိုရှည်လွန်းမနေအောင်နဲ့ ပိုပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင် တည်းဖြတ်ထားပါတယ်။
ကလေးသူငယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကို The Importance of Being Little ငယ်ရွယ်မှု၏ အရေးပါမှု ဆိုပြီးအမည်းပေးခဲ့တယ်နော် ။ဘာ့ကြောင့်ငယ်ရွယ်ခြင်းက အရေးကြီးရတာပါလဲ? ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေ၊ ပညာရေးသမားတွေနဲ့ မိဘတွေကို ဘာတွေများသိစေချင်လို့ပါလဲ?
နိုင်ငံအနှံ့ခရီးထွက်တာတွေ၊ စာသင်ကြားခြင်း နဲ့ နောက်ခံအမျိုးမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်အသီးသီးက ပညာရေး သမားတွေ မိဘတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရာကနေကျမ သိလာရတာကတော့ကလေးတွေကို ငယ်စဉ် ကလေးဘဝကတည်းက ဆုံးရှုံးရတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ ကျမတို့ကြုံနေရ ပြီဆိုတာပါပဲ။ ငယ်စဉ်ဘဝဆိုတဲ့ကလေးဘဝတန်ဖိုး၊ ကလေးတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ လိုချင်တဲ့လိုအင် စတာတွေကို အလေးပေးမှု မရှိကြတော့ဘူး။
နောင်အနာဂတ်မှာ အမြတ်ရဖို့ ကုန်လှောင်ရင်းနှီးသလိုမျိုး ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုလာတာတွေ ပိုပြီးများလာနေတယ်။ ကလေးတွေအနာဂတ်အတွက် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တယ်လို့ မိဘတွေက ပြောကြတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ငယ်ဘဝအတွေ့ကြုံကို သဘာဝမကျတဲ့နည်းမျိုးတွေနဲ့ ပါဝင်စီမံလာကြတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက ကလေးတွေကြုံရတဲ့ပျ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးတောင် ပျော်ရွှင်ခွင့်မရတော့သလိုပါပဲ။ ကလေးတွေကိုဘေးလည်းကင်းစေ၊ စိတ်လည်းဖိစီးစေဆိုတာလိုမျိုး ရှေ့နောက်မညီတဲ့ အတွေးခေါ်မျိုးရှိ နေကြတယ်။ ကလေးအများစု၊ အထူးသဖြင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေက ကလေးငယ်တွေဟာ ဘယ်တုန်း ကမှမတူတဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျိုး ရကြတယ်။ ကလေသေနူန်း နည်းလာတယ်။ အဟာရချို့တဲ့လို့ဖြစ်ရတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေနည်းလာတယ်။ အလုပ်ခိုင်းဖို့ ကျောက်မီးသွေးတွင်းနက်တွေထဲ ဆင်းခိုင်းစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကလေးတော်တော်များများမှာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ယေဘုယျ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးတွေကိုအသက်ဆုံးစေနိုင်လောက်တဲ့ထိဖြစ်စေတဲ့ အရာမျိုးတွေကို ကျမတို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။
ဒါပေမဲ့အခြားတဖက်မှာတော့ ၂၁-ရာစု အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှု အမြောက်အများကိုလည်း ဖန်တီးနေပြန်ပါတယ်။နည်းပညာက လူငယ်တွေအတွက် မိတ်ဆွေဆိုတာမျိုး အမြဲတစေ ဖြစ်မနေနိုင်ပါဘူး။ သစ်အသစ်သော စိတ်ဖိစီးရမှုတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ မူကြိုကျောင်းတွေမှာ အမှန်တကယ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဖယ်ကျဉ်ခံရမှုတွေရှိနေတယ်။ဥပမာ – (ဒါက အသားရောင်ရှိကလေးတွေ နဲ့ ယောက်ကျားလေးငယ်တွေကြားပိုပြီးသိသာတယ်) စိတ်ကျန်းမာရေးပြသနားရှိတဲ့ကလေးတွေ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာရှိတဲ့ ကလေးတွေတိုးလာနေတာပါ။
“ကလေးဖြစ်ခြင်း” ဆိုတဲ့အချက်က တကယ့်ကို အရေးပါတာပါ။လူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာ ငယ်ဘဝ အမှတ်လက္ခဏာတွေကို တွေ့မြင်ကြရတာကြောင့်ပါ။ ကစားရင်း သင်ယူခွင့်ရခဲ့ရင် ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး
နှစ်နှစ်ကာကာ ဆက်ဆံခွင့်တွေ ရခဲ့ကြရင် သူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းတွေက ပိုရှည်ကြာသလို၊ လူမှုစီးပွါးစွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်း ပိုကောင်းလာကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲဦးနှောက်တွေက သဘာဝကျကျ ဖွံ့ဖြိုးခွင့်ရ၊ ဘာသာစကားတွေကြွယ်ဝစွာနဲ့ အလျင်လိုမနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းခွင့်ရမယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ဟိုအရင်တုံးကထက်ပိုရှင်း လာတဲ့အချက်ကတော့ ကလေးဆိုတာ
မှန်ပါတယ်ရှင့်။ဒါနဲ့ ရှင့်ရဲ့စာအုပ်မှာ Adultification လူကြီးသတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးခဲ့တယ်နော်။ ဒါကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမလဲရှင့်။ ပြီးတော့ ကလေးဘဝနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမတို့ရဲ့အမြင်အပေါ် ဒါက ဘယ်လို သက်ရောက်မှုမျိုးရှိစေမလဲ?
Adultification ဆိုတာက ကလေးတစ်ယောက်အမြင်မျိုးနဲ့လောကကိုမကြည့်မြင်နိုင်တော့ကိုဆိုလို တာပါ။ တခါတရံ ဆရာဆရာမတွေကို ကျမပြောတယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချပြီး ၄-နှစ်သားကလေး မြင်ရတဲ့ အမြင့်ကနေ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ကြည့်စမ်းပါလို့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကလေးတွေဝတ်တဲ့ နှင်းကာဝတ်ပြီး၊ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေလက်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို စမ်းကြည့်ကြစမ်းပါလို့။ ဒါက လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အချိန်ဇယားတွေစီမံမှု၊ ကလေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ လူကြီးနူန်းနဲ့ ကလေးတွေပေါ် စဉ်းစားမှုတွေကို အမြင်ပွင့်စေမယ့် နည်းများစွာထဲက တစ်နည်းပါပဲ။ အရင်ခေတ်ကလေးတွေထက် အတန်းထဲမှာ အချိန်အကြာကြီးပိုနေရ အိပ်စက်ချိန်တွေပို နည်းကုန်ရတာ ဘာအတွက်လဲ? ကလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဦးနှောက်တွေ က လူကြီးတွေရဲ့ အစီစဉ် ဇယားတွေ၊ လူကြီးစံနူန်းတွေအတိုင်း လိုက်နိုင်ဖို့ ပုံစံထုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ မိဘတွေရော၊ ပညာရေးသမားတွေပါ လက်ခံသဘောတူနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ဒါကပြသနာတစ်ရပ်ပဲလို့တော့ အခြေခံအားဖြင့်သိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသံသရာလည်နေတာကိုတော့
ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ခက်နေကြတယ်။ နောက်ကိုခြေတစ်လှမ်းပြန်ဆုတ်ပြီး ကလေးတွေရဲ့အမြင်နဲ့ လောကကြီးကို ကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုပြီ။လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကျမတို့ကြည့်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရွှံ့ပုံးထဲကို တစ်နာရီလောက်ထိုင် တူးနေတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုသင်ယူမှုမျိုးကိုမှ ကျမတို့အနေနဲ့မြင်နိုင်စရာမရှိဘူး။ ဒီတော့ သင်္ချာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ ဆိုပြီးကြိမ်တို့နှင်လွှတ်တယ်။
အပြင်ထွက်ကစားရတဲ့ ကစားချိန်က နည်းလိုက်တာဆိုပြီး စိတ်ပျက် စိတ်ကုန်စေတယ်။ ကလေးအများစု သူတို့ငယ်ဘဝမှာရခဲ့ကြတဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်စွမ်းစေတဲ့ကစားနည်းတွေလေ။ ဒီလိုမျိုး လူကြီးလိုသဘောထားသတ်မှတ်တာတွေ က ကလေးတွေကို ပိုဖြစ်ထွန်းစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လာတာ။ ကလေးတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လေးလေးနက်နက် မယုံကြည်ရာကနေဖြစ်လာတာပါ။
အရည်သွေးမြင့် ကလေးသူငယ်ပညာရေး ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါလဲ? အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာတွေကို
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ မူကြိုကျောင်းတစ်ခုထဲကို လမ်းလျှောက်ဝင်သွားခဲ့ရင် ဘာတွေမြင်လို့
ဘာတွေကြားရမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? အရည်သွေးရှိ ပညာရေး ဆိုတာက ဆက်ဆံရေးတွေပါပဲ။ ကလေးဖွံဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ နားလည်တဲ့ ၊သိတဲ့၊ ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့၊ မိမိတို့ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကလေးတွေကို တစ်သားတည်းဖြစ်လာစေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ ကျမတို့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ပညာရေး အရည် အသွေးကို တိုင်းတာနေတဲ့ အတိုင်းအတာ များစွာထက်ကို ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ အတန်းအရွယ်အစားတို့၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တို့၊ အထူးရေးဆွဲ
ထားတဲ့ သင်ရိုးတို့ ဆိုတာတွေထက်ကို အများကြီးပိုပြီးအရေးပါ ပါတယ်။
လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စကားတွေအများကြီးအပြန်အလှန်ပြောဆိုတာမျိုးက အလွန်အရေးကြီးတယ်။
တစ်နေ့တာမှာ နွေးထွေး ခံစားပေးတတ်တဲ့ စကားပြောတာမျိုးကို ကလေးတွေ တွေ့ကြုံရဖို့လိုတယ်။
အချင်းချင်းလည်း စနောက် ကြည်ဆယ်ရင်း စကားပြောချိန်ရှိဖို့လိုတယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ တောင်စဉ်ရေမရစကားတွေ ပြောကြဖို့အချိန်လည်းရှိဖို့လိုတယ်။စာကောင်းပေမွန်တွေကို နားထောင်စေရင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်းမေးတတ်ကြရမယ်။
သုတေသနအရတော့ အရည်ချင်းရှိတဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်သူဆိုတာ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု (၃-နှစ်အရွယ်ကလေးက ဘယ်လို) အပြင် နှီးနွယ်နေတဲ့ အခြားဖွံ့ဖြိုးမှု အတိုင်းအတာတွေကိုလည်း သိရလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေး တစ်ဦးချင်း (ကိုယ့်ကလေးကဘယ်လိုဆိုတာ) ကိုလည်းသိကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသေအချာမှတ်ထားရမှာ ကတော့ စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သင်ပေးတဲ့သင်ကြားရေးဆိုတာ ပွဲခင်းထဲမှာ ကလေးတိုင်း ပြေးချင်သလို ပြေးလို့ရတာမျိုးနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကိုပါပဲ။
အရည်အသွေးရှိတဲ့ မူကြိုဆရာ ဆိုတာ သူလုပ်သမျှတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရတယ်။ အတန်းအစီအစဉ်ဇယား၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်း၊ အတန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ကလေးတွေ စူးစမ်းရှာဖွေဖို့ ၊ ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုင်တွယ်ဖို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအဆုံး အားလုံးသူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူရှိရမယ်။
ဒီလိုဆရာဆရာမမျိုးတွေက လေ့လာစောင့်ကြည့်တာ၊ ပြန်လှန်သုံးသပ်တာ စတာတွေ အတွက်အချိန်ကို သူမတူအောင် အသုံးပြုကြသူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာမှမရှိပဲနဲ့တော့ ဘာကိုသွားစောင့်ကြည့်မလဲ။ အကောင်းဆုံး မူကြိုကျောင်းဆိုတာ တာဝန်သိမှု၊ စူးစမ်းလေ့လာမှု တွေကို အခြေခံတဲ့ ပျိုးထောင်မှုမျိုးရှိတဲ့ကျောင်းပါပဲ။ ဒီလိုသဘာဝရှိမှလည်း အတူတူ စူးစမ်းလေ့လာ နိုင်မယ်၊ ကလေးတွေရဲ့စူးစမ်းစပ်စုလိုတဲ့ စိတ်နေသဘာဝ အသုံးချပြီး မိမိတို့ရဲ့သင်ယူမှု ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီး ကောင်းအောင် ပြုပြင်သွားနိုင်မှာပေါ့။
ဒါကစိတ်ဒါဏ်ရာရှိတဲ့ကလေးတွေ၊ သူများနဲ့မတူတဲ့ ငယ်ဘဝ ခါးသီးအတွေ့ကြုံရှိတဲ့ ကလေး အများစုအတွက် လုံးဝအမှန်တရားပါပဲ။ညကဘာမှ မစားခဲ့ရဘဲ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရပြီး အိပ်ယာနိုး တံခါးဝဆီ ထသွားတဲ့ကလေး၊ ဒါမှမဟုတ်- ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ခံရ၊ ကိုယ့်ကို လက်ခံတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ အဖိုး၊ အဖွားစသည်ရှိတဲ့ ကလေးဆိုပါစို့ … အရည်သွေးရှိ မူကြိုကျောင်း စာသင်ခန်းမှာ အတွေ့ကြုံတွေအခြေခံတဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေရှိမယ်။ အသိဉာဏ်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ခံစားမှုတွေဖွံ့ဖြိုးစေမဲ့နည်း လမ်းရှိမယ်။ ဒီလို ပါတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ပညာပေးသူတွေက ကလေးအားလုံး အပြည့်အဝ သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စမှတ်ကနေ စကြရလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ကျောင်း ၊ဒါမှမဟုတ် ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေ ပြောကြတဲ့ သင်ယူမှုဆိုတာတွေမျိုးတွေကိုလည်း ငြင်းပယ်ရလိမ့်မယ်။
ကစားခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံ အကြောင်း ရှင်ကတော်တော်များများရေးထားတယ်။ ဒီတော့ ကစားခြင်းဆိုတာကို ရှင်ကဘယ်လိုများအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါသလဲ။ပြီးတော့ ကစားခြင်းက ဘာ့ကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးရပါသလဲ?
ကစားတာက နို့တိုက်သတ္တဝါတွေမှာ ဖွံဖြိုးမှု အတွက်လိုအပ်တဲ့အလုပ်ပါပဲ။ ဒီလိုကစားလိုစိတ်က
ချိုးနှိမ်လို့မရအောင်ကို အရိုးအသားထဲစွဲနေတဲ့ လှုံ့ဆော်ချက်ပဲ။ အရေးကြီးတာက ကစားချင်တဲ့ စိတ်ကတစ်ခု၊ ကစားနည်းသိတာက တခြားဖြစ်တယ်။၊ အမြဲသဘာဝကျနေဖို့ လိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သေသေချာချာစနစ်တကျပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုတယ်။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပိုပြီး တလွဲကျတဲ့ ကစားနည်းတွေ များနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကလေးတွေက သက်ရွယ်မျိုးစုံအုပ်စုတွေနဲ့ မကစားကြဘူး။ အသက်ရွယ်စုံအုပ်စုမှာဆိုရင် အငယ်တွေက အကြီးတွေထံနေ သင်ယူလို့ရတယ်။ အကြီးတွေကလည်း ငယ်သူအပေါ် သနားတာ၊ညှာတာ တာတွေကို သင်ယူခွင့်ရမယ်။ ကလေးတွေ ဆူညံပတ် ပြေးနေတဲ့ အချိန်မျိုးနဲသွားပြီး ကိုယ့်ကစားပွဲစည်းကမ်း ကိုယ်ချတတ်လာမယ်။ ထိထိရောက်ရောက် ကစားနိုင်ဖို့ရာအတွက် နေရာနဲ့ အချိန်လိုတယ်။
ပြီးတော့ ကစားတာကို တန်ဖိုးထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးလည်းရှိဖို့လိုတယ်။
ဒီလို ကလေးသဘာဝ ယဉ်ကျေးမှုတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။ “ကဲဟေ့။ကတ်ထူပြားတွေနဲ့ ခံတပ်တစ်ခုသွားလုပ်ကြ” လို့ ကလေးတွေကို ချက်ခြင်း ခိုင်းလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ စနစ်တကျ စီမံထားတဲ့အချိန်မရှိ၊ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်း ရှာလို့ရနိုင်မယ့် နေရာမရှိ၊ စားချိန်လွတ်စီမံတာမရှိဆိုရင် စိတ်တိုနေမယ့် စိတ်ပါလက်ပါမရှိတဲ့ကလေးပဲ တွေ့ရဖို့ပိုဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ကျမတို့က မူကြိုလို့သုံးနူန်းခေါ်ဝေါ်နေတဲ့စကားလုံးမှာ ကလေးသူငယ်သင်ရိုးဆိုတာမျိုး အစစ်အမှန်ပါဝင်နေစရာမလိုဘူးလို့ ရှင်ကပြောခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာလည်း ဒီလိုမျိုးရှိနေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်။
ပန်းပွင့်ပေါ် လိပ်ပြာနားတာကို ကြည့်ပြီး အံ့ဩနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်က အံ့အားသင့်မှုကိုတွေ့မြင်တဲ့ဘယ်သူမဆိုဟာ သင်ယူမှုဆိုတာ စာသင်ခန်းထဲမှာပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုနေရာ အနေအထားမှာ မဆို သင်ယူနိုင်စွမ်းက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီထဲကကို ရှိနေတယ်၊ ပါလာတယ် ဆိုတာကတော့ သတင်းကောင်းပဲ။ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ အတူ ဖေးမကူညီမှုရှိခဲ့ရင် မူကြိုကျောင်းကခေါင်းလောင်းသံ၊ ခရာသံတွေမပါလည်း ကလေးတွေ သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ယူမှု အများစုက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြောကြသလို လူကြီးနဲ့ ကလေးငယ်အကြား အပြန်အလှန် အပေး အယူ ဆက်ဆံရေးကနေ သဘာဝအတိုင်း ရရှိလာကြတာဖြစ်တယ်။ တချို့ကတော့လည်း စကားပြောတဲ့ စုံတွဲ ဆိုပြီးသုံးလေ့ရှိတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ နေ့စဉ်ဆက်ဆံရေးမှာ ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးချဖို့ မိဘတွေနဲ့ ပညာရေးသမားတွေကို လမ်းညွှန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟလို့ ဝင်ငွေနည်း မိသားစုက ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး အလှမ်းမမီမှု ကွာဟချက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သက်သေအထောက်အထားအ များကြီး ကျမတို့မှာရှိပါတယ်။ ပန်းသီးကဘာရောင်လဲ”။ “ ဘာပုံဆွဲနေတာလဲ” စတဲ့ စစ်မေးခြင်းဆန်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ “ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးအကြောင်း ဆရာမကို ပြောပြပါလား” ဆိုတဲ့ ပြောလိုရာပြောလို့ရတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေမေးဖို့ ဆရာဆရာမတွေကို ကျမလမ်းညွှန်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီလို ပြောချင်ရာ တုန့်ပြန်ပြောနိုင်ခြင်းက နက်ရှိုင်းတဲ့သင်ယူမှု နဲ့ ချက်ခြင်း သင်ယူမှုအတွက် ဧရာမ ကွင်းကြီးတစ်ခုကို အမှန်တကယ် ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
(မူရင်းဆောင်းပါး https://www.edutopia.org/article/whats-lost-when-we-rush-kids-through-childhood အား ဘာသာပြန်ပါသည်။)